एसडीएफ चेली मोर्चा महासचिवको प्रश्न, एसकेएम नारीशक्तिका आइरन लेडीहरू कहाँ छन्‌ – Sikkim Journal
एसडीएफ चेली मोर्चा महासचिवको प्रश्न, एसकेएम नारीशक्तिका आइरन लेडीहरू कहाँ छन्‌
गान्तोक, 07 जून। पूर्व सिक्किमको मुलुके स्थित स्विस गार्निस दवाई कारखानाको युनिट-दुईमा कार्यरत एक महिला श्रमिकमाथि भएको दुष्कर्मको घटनाले राज्यको राजनीति देखि सामाजिक रेखा पनि निक्कै तन्किएर गरएको छ। यसलाई लिएर राज्यको प्रमुख विपक्षी पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) पार्टीले लगातार राज्य सरकार र सत्तारूढ एसकेएम पार्टीमाथि वाक प्रहार गरिररेको छ। यसै सन्दर्भमा एसडीएफ पार्टी चेली मोर्चा (पूर्व) जिल्लाकी महासचिव सकुन गुरुङले आज एउटा प्रसे विज्ञप्ति जारी गरेकी छन्। विज्ञप्तिमा महासचिव गुरुङ्ले गत 01 जूनको दिन स्विस गार्नियर युनिट दुई फर्मा कम्पनीमा कार्यरत महिला श्रमिकमाथि सत्तारूढ एसकेएम पार्टीका क्षेत्रीय युवा मोर्चा उप-संयोजक सुकबीर भुजेलले हातपात र कुटपिट गरेको कुरा उल्लेख गरेकी छन्। उनले यस विषयमा एसकेएम नारीशक्ति आजसम्म किन मौन छ भनि प्रश्न गरेकी छन्।
उनले विज्ञप्ति मार्फत प्रश्न गरेकी छन्, ‘गत एक जूनका दिन स्विस गार्नियर युनिट (दुइ) फार्मा कम्पनीमा कार्यरत महिला श्रमिकमाथि एसकेएम पार्टीका क्षेत्रस्तरीय युवामोर्चा उप-संयोजक सुकबीर भुजेलले हातपात र कुटपिट गरेको कुकृत्यबारे एसकेएम नारीशक्ति आजसम्म किन मौन छन्‌? एसकेएम नारीशक्तिका आइरन लेडीहरू यसबेला कहाँ छन्‌? नारीशक्तिका ठुलो ओहोदामा बसेका सरकार र महिलाहरूको ब्रिज बन्ने डङ्‌का पिट्ने नेतृहरू कहाँ छन्‌? महिला श्रमिकमाथि भएको यस प्रकारको घोर अत्याचारमाथि एसकेएम नारीशक्तिका नेतृहरूले यति दिन बितिसक्दा पनि कुनै बयान तथा प्रतिबद्धता जाहेर नगर्नु अत्यन्त निन्दनीय विषय हो’।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कि, राज्यमा घटिरहेका अनेकौं यस्ता असामाजिक घटनाहरूले एसकेएम सरकार जन विरोधी, गरीब विरोधी र नारी विरोधी रहेको प्रमाण भएको छ। यसप्रति हामी घोर आपत्ति जनाउँदछौं। एसकेएम सरकारमा नारी सशक्तिकरणको पक्षमा आजसम्म न्यायसङ्‌गत काम शून्यको बराबर छ। सामाजिक सञ्जालमा माहिलालाई एक दिने मेयर घोषणा गरी ऐतिहासिक कामको नमूना देखाउन आतुरिएर आफ्नै नेतृत्वलाई अपमान गर्ने यस पार्टी नारीहरूको पक्षमा निष्पक्ष नरहेको उदाङ्‌गो भएको छ। यसरीनै आफ्नो श्रम र कडा मिहेनतले जीवन निर्वाह गर्दै परिवारको पालन-पोषण गर्ने श्रमिक महिलाका न्यायको पक्षमा एसकेएम पार्टीले अग्रसरता नदेखाउनु लज्जास्पद विषय हो। यसले एसकेएम सरकार महिलाहरूलाई न्याय दिन गम्भीर नरहेको अर्को कुरा पनि छर्लङ्‌ग भएको छ।
यसरीनै एसडाएफ चेलीमोर्चा राज्यका श्रमविभागकी महिला सचिवा लगायत सम्बन्धित निकायलाई महिला श्रमिकमाथि भएको अत्याचार काण्डलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिने माग राख्दछौं। आरोपीलाई कडा सजाय दिलाउने पक्षमा श्रमिक विभाग र श्रमिक आयोगको प्रभावकारी हस्तक्षेप हुनुपर्दछ। यद्यपि आजसम्म सम्बन्धित निकाय मौन रहेकाले महिला श्रमिक प्रिति भोटियाले न्याय पाउन सकेको छैन। सिक्किम राज्य महिला आयोगले पनि यस काण्डलाई प्राथमिकता दिएर आरोपिमाथि कार्वही गर्न अग्रसर बन्नु पर्छ भनी हामी माग राख्दछौं।
आरोपी आज निर्धक्क भएर हिडिरहेका छन्‌। उनले आफ्नो गल्ती छोप्नलाई भाडामा विधायकका पी ए एवम्‌ तित्त्रेबोटे विद्यालयका प्रध्यान अध्यापकलाई सामाजिक सञ्जालमा आधारहीन बयानबाजी गर्न खेतला लगाएका छन्‌। विधायकका पी एले आरोपीलाई आफ्नो व्यक्तिगत अदालतबाट क्लिन चिट दिदै एउटी महिलामाथि भएको घोर अत्याचार र अपमानलाई छोप्ने काम गर्दैछन्‌। उनलाई यसरी बयान जारी गर्ने अधिकार कसले दियो? यो सर्बिस रूलको सरासर उलङ्‌घन हो। यस सम्बन्धमा डीओपी अर्थात्‌ कर्मी विभागले किन कार्वाही गर्दैन? उनको नौकरी चाडै बर्खास्त गर्ने माग पनि हामी राख्दछौं। अन्त्यमा सत्ताको आडमा हौसिएर एसकेएम पार्टीका क्षेत्रस्तरीय युवा उप-संयोजकले महिला श्रमिकमाथि गरेको हातपात र कुटपिटकाण्डलाई एसडीएफ चेली मोर्चा राष्ट्रिय महिला आयोग र राज्य मानव अधिकार आयोगको पनि ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छौं।